KHOLMOGORSKAYA TARAQ KA MID AH LO'DA, WAXA IYADA - XOOLAHA
Cows kholmogory ee lo'da
Xayawaanka noocan oo kale ah sida lo'da ayaa muddo dheer loo tixgeliyay inuu yahay mid ka mid ah kuwa wax ka taraya dhammaan quruumaha.
Dalalka qaarkood, xayawaankan waxaa laga arki karaa calaamadaha gobolka.
Iyo Hindiya, guud ahaan, lo'da waxaa loo tixgeliyaa xayawaan xayawaan ah.
Wakhtiga maanta waxaa jira noocyo farabadan oo ah lo'da.
Xayawaankani waxay kor u qaadaan ma aha oo kaliya waxyaabaha caanaha laga sameeyo, laakiin sidoo kale hilibka.
Lo'da quudinta ma aha hawl fudud, waxaad u baahan tahay inaad si aad ah ugu shaqeyso arintan.
Maqaalkani waxaad ka heli doontaa waxyaabo badan oo xiiso leh oo waxtar leh oo ku saabsan taranka Kholmogory ee lo'da.
Calaamado caan ah oo ka mid ah lo'da Kholmogory ee lo'da
Xayawaanka Tani waxay iska leeyihiin nooca caanaha, taas oo caddaynaysa in lo'da Kholmogory ahaa loo bakhtiiyey soosaarka caanaha oo sarreeya.
Qarnigii siddeed iyo tobnaad, waxaa jiray dalab aad u wayn oo loogu talagalay waxyaabaha caanaha laga sameeyey, sidaa darteed, tarbiyadu waxay isku dayeen inay abuuraan wax cusub. Laakiin ilaa wakhtigaasi waxaa jiray khilaaf badan oo ku saabsan sidan caleenta lo'da ah.
Mid ka mid ah dhinacyadu waxay aaminsan yihiin in jinsiga Kholmogory uu kacay ka dib markii laga soo gudbay lo'da Dutch ee lo'da maxaliga ah, halka kuwa kalana ay aaminsan yihiin in tani ay tahay mid caan ah oo Ruush ah oo lo'da ah, kaas oo laga qoday gobolka Arkhangelsk ee degmada Kholmogorsky.
Sababta fikradani waa iswaafajinta lo'da ee caansaankani u leeyahay xaaladaha cimilada ee gobolka, iyo sidoo kale cabsida aan hargabka qabin oo aan macquul ahayn mawduuca.
Soo bandhiga rasmiga ah ee Kholmogorska beeraha beeraha wuxuu dhacay 1937.
Beeraleydu waxay martigalisaa lo'dadan cawska ayaa aad ugu faraxsan. Sababtoo ah caanuhu waa sahlan tahay inay koraan, waxay ku jirtaa caafimaad wanaagsan waxayna ku farxeysaa caano.
Waxaa sidoo kale xiiso leh in laga akhriyo waxyaabaha ku saabsan sifeynta lo'da.
Tilmaamo kala duwan Kholmogorsky ee lo'da:
Miisaanka hal xayawaan ah ee noocaan ah wuxuu u dhexeeyaa inta u dhexeysa 450-500 kiiloogaraam dumar, iyo dibi qiyaastii 900 kiilo garaam. Haddii xayawaanka la cuno xoolo, miisaankoodu waa ka weyn yahay.
Miisaanka xayawaanka ah ee xayawaanku waa 53 boqolkiiba miisaanka jidhka, iyo haddii aad raacdo dhammaan heerarka maadada Kholmogory ee lo'da, ka dibna waxaa dhici karta in boqolkiiba 65.
Madaxa cawsku waa weyn yahay, qoortuna waa buluug.
Goobta feeraha ee centimeter waxay ku dhowaad laba boqol. Qoto dheer waxay kudhowdahay toddobaatan mitir.
Maqaarku ma aha mid aad u qaro weyn
Jirka jirku waa lafo xoog leh, lafo xoog leh, jirku waa mid sarreeya. Tani waxay ka dhalatay lo'da ku filan oo horumar leh. Cows of this caleemaha yihiin kuwo aad u sarreeya. Qeybaha lo'da waxay noqon karaan ilaa 135 sentimitir. Dhabarka dhabarkan waa mid ballaaran, waxaa la arkaa in maskaxdu ay kiciso.
Qaybta muruqyada waa cufan oo qallalan, si dhexdhexaad ah loo horumariyo.
Udder dhexdhexaad ah. Qaabkeeduna waa koob ama qaab wareegsan. Sannad ka mid ah lo'da waxaad cabbi kartaa ilaa 3300 kiiloogaraam oo caano ah. Noocyada dufanka ee badeecadani waa afar boqolkiiba, laakiin haddii uu lo'da uu ku tarmaan, markaa shaxdani waxay kordhin kartaa ilaa laba jeer.
Midabka Kholmogory ee lo'da ayaa noqon kara mid madow iyo caddaan ah, iyo shakhsiyaadka midab cas oo kala duwan ayaa laga heli karaa.
Muuqaal muuqaal ah ayaa si sax ah loogu xiraa.
Astaamaha Cows Kholmogory:
Caanahan Tani waxay ka duwan tahay dadka kale ee cabbirka iyo midabka.
Si habboon loo dhigo addimada waa muuqaal ka mid ah lo'da.
Caanaha holmogory waxay leeyihiin hilib wanaagsan iyo caano wanaagsan.
Tilmaamaha noocaas ah waa nooca caanaha.
Cows of this caleen ayaa ka mid ah saddexda nooc ee ugu caansan.
Faa'iidooyinka loo isticmaali karo inay ku gartaan jinsiga Kholmogory ee lo'da:
Ma ahan mid madaxbannaan.
Kholmogorskaya ayaa si fiican loogu habeeyey xaaladaha cimilada qabow.
Tilmaamaha tayada aad u fiican, caanaha iyo hilibka.
Dastuurka adag ee jirku waa tayo wanaagsan.
Tan iyo markii loola jeedo nooca caanaha, tilmaame wanaagsan waa dhalid caano ballaaran.
Caanaha ilmagaleenkaan wuxuu leeyahay difaac aad u xasilloon oo cudurro kala duwan ah.
Cows kholmogory ee lo'da waa mid aad u badan.
Dhibaatada ah ee lo'da Kholmogory ee lo'da waxaa ka mid ah:
Wax soo saarka waxoogaa hoos udhacay markii la koray goobaha koonfurta ee kulul.
Faa'idada waxaa sidoo kale loo tixgelin karaa sida laabta cidhiidhi ah iyo maaha murqaha aad u horumarsan ee dhabarka, vislozadost.
Waa maxay wax soo saarka beeraha lo'da ee Kholmogory?
Waqtigan xaadirka ah, jinsiyadu wali waa shaqo joogto ah si ay u hagaajiyaan tayada jinsiga Kholmogory ee lo'da. Shaqooyinkaas waxaa loogu talagalay in la kordhiyo tirada jirka, oo markaa sii kordhinta miisaanka xoolaha.
Cows of this breed tolerates xaaladaha cimilada aad u kala duwan. Cows ma aha mid macquul ah mawduuca.
Celcelis ahaan, waxsoosaarka caanaha ee hal lo'da sannadkiiba wuxuu ku saabsan yahay 3,300 kiilo garaam. Waxaa sidoo kale jira diiwaannada lo'da oo soo saari kara ilaa todoba tan oo caano ah sanadkiiba. Tayada hilibka sidoo kale waa mid aad u sareysa. Tilmaamayaashani waxay leeyihiin saameyn aad u wanaagsan dalabka dalagga.
Caanaha Kholmogory ee lo'da waa mid xajmi ah. Horeba da'da soddon bilood, lo'da ugu horeysay ee lo'da. Miisaanka dhalidda cusub ee dhalatay wuxuu gaaraa 35 kiilogaraam.
Cunnooyin aad u dhadhan fiican leh oo kaabash ah ayaa lagu daboolay bangiyada loogu talagalay jiilaalka, iyo dhammaan siraha diyaarinta
"Alette": habka dalabka codsiga iyo isticmaalka
Sidee loo iskacaabiyaa spathiphyllum digsi kale guriga
Noocyada iyo noocyada stevia
Kiev waxay martigelin doontaa bandhigga "MADAXA LA QABTAYO CALAAMADAHA CUTUBKA 2017"
Xitaa bannaanka udgoon wuxuu ogaaday in koritaanka cusub ee u muuqday midhaha ama dalagyada dalagyada, leexashada iyo cilladaha kale ee aan asal-macquul ahayn ay tilmaamayaan horumarinta cudurrada. Sidee loo aqoonsan karaa cudurada hormaraya iyo si sax ah u doortaan hababka loola dagaalamayo, waxaan sii sheegi doonnaa qodobbada leh sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan magaca iyo sawirka cudurrada ugu caansan ee geedaha. Read More
Almond: sida loo abuuro iyo daryeelka